Izindaba - Eduze kwedayi lefoni
Eduze kodayi we-infrared
Eduze kwedayi we-infrared akhombisa ukumuncwa kokukhanya endaweni eseduzane ye-infrared ka-700-2000 nm. Ukumuncwa kwabo okukhulu kuvame ukuvela ekudlulisweni kwenkokhiso kudayi ophilayo noma insimbi eyinsimbi.
Izinto zokwenziwa kokufakwa ngaphakathi kwe-infrared zifaka odayi be-cyanine abane-polymethine enwetshiwe, udayi we-phthalocyanine onesikhungo sensimbi se-aluminium noma i-zinc, udayi we-naphthalocyanine, izakhiwo ze-nickel dithiolene ezine-geometry eyisikwele, amadayi e-squarylium, ama-analog we-quinone, amakhemikhali e-diimonium kanye nemikhiqizo ye-azo.
Izicelo ezisebenzisa la madayi we-organic zifaka ukumakwa kokuphepha, i-lithography, imidiya yokuqopha ebonakalayo nezihlungi ze-optical. Inqubo eyenziwe nge-laser idinga edayi aseduze kwe-infrared anokumuncwa okubucayi okude kunama-700 nm, ukuncibilika okuphezulu kwama-solvents afanelekile we-organic, kanye nokuvikela okuhle kakhulu kokushisa.
In ukuze kukhuliswe ukusebenza kahle kwamandla kokuguqulwa kweseli yelanga ephilayo, kudingeka udayi osebenza kahle oseduze, ngoba ukukhanya kwelanga kufaka phakathi ukukhanya kwe-infrared.
Ngaphezu kwalokho, odayi abaseduze kwe-infrared kulindeleke ukuthi babe yi-biomaterials ye-chemotherapy kanye ne-imaging-tissue e-vivo ngokusebenzisa izenzakalo ze-luminescent esifundeni esiseduze se-infrared.